Isichumisi seOrganic Pelleting Prouction line sikwabizwa ngokuba yiPellet kunye nePoland Line okanye iFlat Die Pelleting Line. Yahlukile kodwa inokusetyenziswa ngokubanzi. I-pelletizer inokusetyenziselwa ukuvelisa iipellets zobume be-cylindrical enobubanzi obungu-3-10mm, nokuba kukutya kweenkukhu okanye ukujongana nenkunkuma kwi-granules yezichumiso eziphilayo. Ayinawo nawuphi na umatshini wokomisa kodwa umatshini wokupholisa umoya uyimfuneko. Xa i-roller icinezela izinto kwiipellets, iipellets ziya kushushu ngokukhawuleza kwaye zibe bubushushu obuphezulu, kufuneka zipholile ngaphambi kokupakisha. Ikakhulu ikhomba ukuvelisa umlinganiselo omkhulu wemicu ephilayo.
I-1000MT / Y-10000MT / Y, 30000MT / Y, 50000MT / Y
Imveliso ye-organic Organic Pelleting Production ilayini eyahlukileyo, yahlukile kwezinye izityalo zezichumiso eziphilayo, umzobo wayo ucetyiswa ngolu hlobo lulandelayo:
1. Inkqubo yokwenza umgquba okanye ukubila
2. inkqubo yokutyumza nokuhlola
3. inkqubo yokuxuba
4. inkqubo pelleting kunye ipolishi
5. inkqubo yokupholisa
Umba Umatshini wokuvelisa isichumiso se-Pellet Pellet